Rasmi: Macalin Cabdi Joon oo iska Casilay Xilikii kooxda Elman | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Rasmi: Macalin Cabdi Joon oo iska Casilay Xilikii kooxda Elman
(13-4-2018) Sida uu Shabakedda qalinkacayaaraha u xaqiijiyey Macalin Cabdi Maxamed Maxamuud (Cabdi Joon) Waxa uu iska casilay xilikii Macalinnimo ee Naadiga kubada cagta Elman isaga oo istiqaaladiisa u gudbiyey Maamulka Naadiga.
Macalin Cabdi Joon oo aan Wax ka weydiiney sababta keentay in uu iska Casilo xilikii Tababarnimo ee kooxda Elman ayaa sheegay in uu ku daaley Naadiga isla markaana ay soo wajaheen Guuldarooyin fara badan Xili cayaareedkaan sidaa daraadeed uu u Go aansaday in uu Nasto isla Markaana uu katago kooxda.
Sidoo kale Macalinka ayaa iska fogeeyey in ay jiraan qilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Maamulka kooxda Elman balse isagu uu Go aansaday in uu xilka iska dhiibo isla Markaana uu doonayo in uu kanasto Kubada cagta bilaha soo socda.
Marka laga soo tago Hadalka uu qarbaahinta siiyey macalin Cabdi Joon majiro oo nama soo gaarin ilaa hada wax war ah oo ka soo baxay Maamulka kooxda Elman iyo uu jiro Macalin loo magacaabay kooxda ilaa hada.
Ninkaan xilka iska casilay ayaa kooxda Elman u qaaday koobka Jenaral daa.uud iyo Super Cupka Soomaaliya balse waxaa markii uu bilaawday Horyaalka Soo wajahay Guuldarooyin xiriir ah oo sida muuqata uu u maaro waayey.